Hoteelada: Dakhliga safarka ganacsigu wuxuu hoos u dhacay $ 59 bilyan sanadka 2021
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Warshadaha Warshadaha » Hoteelada: Dakhliga safarka ganacsigu wuxuu hoos u dhacay $ 59 bilyan sanadka 2021
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Safarka meheraddu wuu ka gaabiyey inuu soo laabto tan iyo markii uu bilaabmay masiibada. Safarrada ganacsiga waxaa ka mid ah shirkad, koox, dowladda, iyo qeybaha kale ee ganacsiga. Dakhliga safarka ganacsiga lama filayo inuu gaaro heerar ka hor masiibada ilaa 2024.
Warshadaha hoteelka ayaa la saadaalinayaa inay dhammaadaan 2021 -ka in ka badan $ 59 bilyan oo dakhli safar ganacsi ah.
Warshadaha hoteelku waxay lumiyeen ku dhawaad ​​$ 49 bilyan dakhligii safarka ganacsiga 2020.
Socdaalka meheraddu waa ilaha dakhli ee ugu weyn warshadaha hoteelka.
Warshadaha hoteelka ayaa la saadaalinayaa inay dhammaadaan 2021 -ka in ka badan $ 59 bilyan oo dakhli safar ganacsi marka la barbar dhigo 2019, sida lagu sheegay warbixin cusub oo maanta la soo saaray. Taasi waxay timid kadib markii laga lumiyey ku dhawaad ​​$ 49 bilyan dakhligii safarka ganacsiga 2020.
Socdaalka meheraddu waa ilaha dakhli ee ugu weyn warshadaha hoteelka wuxuuna ka gaabiyey soo noqoshada tan iyo markii uu cudurku dillaacay. Safarrada ganacsiga waxaa ka mid ah shirkad, koox, dowladda, iyo qeybaha kale ee ganacsiga. Dakhliga safarka ganacsiga lama filayo inuu gaaro heerar ka hor masiibada ilaa 2024.
Falanqaynta cusubi waxay ku soo beegmaysaa sahan dhowaan laga sameeyay AHLA, kaas oo lagu ogaaday in inta badan socotada ganacsigu ay baajinayaan, yaraynayaan, oo dib u dhigayaan safarada iyada oo ay sii kordhayaan kiisaska COVID-19.
Safar la'aanta ganacsiga iyo dhacdooyinka ayaa saameyn weyn ku leh shaqada, waxayna hoosta ka xarriiqaysaa baahida loo qabo gargaarka federaalka ee la beegsanayo, sida Xeerka Shaqooyinka Hoteelka Badbaadi.
Hoteelada ayaa la filayaa inay soo afjaraan 2021 ku dhawaad ​​500,000 oo shaqo marka la barbar dhigo 2019. 10 -kii qofba ee si toos ah uga shaqaysta hantida hudheelka, hudheeladu waxay taageeraan 26 shaqo oo dheeraad ah oo bulshada dhexdeeda ah, laga bilaabo maqaayadaha iyo tafaariiqda ilaa shirkadaha bixiya hoteelka - taasoo la micno ah ku dhawaad ​​1.3 milyan oo dheeraad ah shaqooyinka hoteelka taageera ayaa iyana halis ku jira.
Chip Rogers, madaxweynaha iyo maamulaha Ururka Hoteelka & Hoyga Mareykanka (AHLA).
“Socdaalka ganacsigu wuxuu muhiim u yahay jiritaanka warshadeena, gaar ahaan xilliga dayrta iyo bilaha jiilaalka marka safarka firaaqadu caadi ahaan bilaabmo inuu hoos u dhaco. Walaaca sii socda ee COVID-19 ee ka dhex jira dadka safarka ah ayaa kaliya uga sii dari doona caqabadahaas. Taasi waa sababta ay tahay waqtigii Koongarasku dhaafi lahaa labada dhinac Badbaadi Sharciga Shaqooyinka Hoteelka si loo caawiyo shaqaalaha hoteelka iyo milkiilayaasha meheradaha yaryar si ay uga badbaadaan dhibaatadan. ”
In kasta oo ay ka mid yihiin kuwa ugu daran, haddana hudheeladuhu waa qaybta kaliya ee soo -dhoweynta iyo warshadaha firaaqada oo aan weli helin gargaar toos ah. Huteelada iyo shaqaalahoodu waxay muujiyeen adkaysi aan caadi ahayn iyagoo wajahaya caqabado dhaqaale oo aan hore loo arag, warshaduhuna waxay taageero uga baahan yihiin Congress -ka si ay u gaaraan soo kabasho buuxda.